Uma ubheka ikhalenda ngamazwe imicimbi, akunakwenzeka ukuthola usuku khulula. Kodwa abaningi ngamaholide jikelele, izakhamuzi ezivamile ngisho nokuwabona. Bewazi yini, isibonelo, lapho usuku amadoda eRussia? Futhi akusiwona Februwari 23 njengoba ngokuyiphutha babekholelwa ngabaningi. Bhala phansi zonke izinsuku ezibalulekile ekhalendeni lakho futhi ungakhohlwa sokujabulisa abathandekayo nge izipho ezincane kanye lezimanga phezu futhi ngaphandle.
amaholide Iningi lamadoda
Abanye abameleli ubulili namandla is ngokuyinhloko ukubuza hhayi ukuhalalisela kubo mhlaka-23 Febhuwari. Le iholidi iyona abantu Entela ebizwa nge "usuku isiqedaphunga", futhi empeleni lokhu usuku abavikeli we lawobaba. Ngakho, uphawu kufanele kube yilabo kuphela abanye kuqhathaniswa amabutho ahlomile. Nokho, namuhla leli ukuhalalisela ukugubha hhayi kuphela ukhonza amadoda, kodwa abafundi besilisa, ukuze isikhathi sesenzakalo esikhulu ukujabulisa abantu onayo. I samanje amadoda ngosuku eRussia lugujwa ngoMgqibelo wokuqala ka-November. Kukhona Umhlaba uSuku Lobaba, okuyinto lugujwa ngeSonto lokuqala Juni. Akufanele sibakhohlwe mayelana usuku womshado, okuyinto lugujwa eRussia ngo-January 20.
Hlobo luni izipho ukunikeza ngosuku amadoda?
Njenganoma iliphi elinye iholide, izipho kumele zikhethwe ngayinye umamukeli ngamunye. Yethula kungaba into ehlobene endaweni yokuzilibazisa. muntu othandekayo zingaba ezinye isikhumbuzo romantic. Okubhekene Ezimweni ezinjalo nezipho nge oqoshiwe bokuzisholo. Lokhu kungaba ucezu ubucwebe, amawashi noma ugwayi icala. Ungakhohlwa mayelana izitifiketi isipho. Zingaba hhayi kuphela ethenga kodwa futhi ezokungcebeleka noma vakashela yimuphi mall. Yekela amadoda ngosuku eRussia kanye ngosuku abahamba ngezimoto - lena iholide ehluke ngokuphelele, umshayeli inveterate anganika ngandlela-accessory ye imoto.
Kanjani ukugubha wobulili namandla?
Ungqimba ongakhetha, kungenzeka ukuhlela usuku noma ukuya emcimbini nabangani endaweni yokudlela noma ikilabhu. Lover noma uyise ungajabulisa dinner okumnandi ekhaya. Uma iholidi luwela osukwini livaliwe, siyakuhalalisela lokuqala amadoda kungenziwa liphinyiselwe ngokushesha nje kummeleli ubulili namandla ukuze uvule amehlo akhe. Phatha ke ibhulakufesi noma isiphuzo embhedeni, ungakwazi ngokushesha anikeze isipho. Chitha usuku njengoba efuna umnikazi holidi. Ungahlela uhambo indawo engavamile noma iya kuphi isikhathi eside uma ngihamba, kodwa hhayi isikhathi esanele. Lokhu kungaba sauna, spa, ukuyodlala i-bowling, amabhiliyade noma virtual ukuzijabulisa centre. Futhi ungacabangi ukuthi lwesigameko holide kufanelekile kuphela abathandi, ngokuqinisekile daddy wakho musa khumbulani ukuchitha amahora ambalwa e-sauna bese uyakhululeka ngezandla masseur okhokhelwayo. Uma sigubha iholidi phakathi nezinyanga zasehlobo, ungaya ku imvelo. Usuku zabesilisa eRussia kungenzeka ukuba uqaphele epikinikini noma uhambo siqu ekhaya lakho iholidi. Akukona ukukhetha okubi - go for izinsukwana ukuba ukuzilibazisa noma resort. Unake ngamaholide ikhalenda bese uzama ukuba bathuthukele ukulungiselela izipho ukubingelela usuku yamadoda, obathandayo uqiniseka lokucabanga ngokwazisa ngawo.
Lo mcimbi ngoSuku Ukunqoba ezimweni umtapo. Imicimbi anikezelwe ekugubheni Victory Day
Yini ukunikeza kumyeni wakhe ku usuku lwawo lomshado?
Kuthiwani uma owesifazane Aquarius